Xasan daahir Aweys oo lagu waddo inuu ka duulo Garoonka Hobyo. (Akhriso dalka marti galinaayo Xassan Daahir) – idalenews.com
Xasan daahir Aweys oo lagu waddo inuu ka duulo Garoonka Hobyo. (Akhriso dalka marti galinaayo Xassan Daahir)
Warar lagu kalsoon yahay ayaa Sheegaya in Hoggaamihii hore ee ururka xibul-Islaam kuna biiray Xarakada Al-shabaan Sheikh Xasan Daahir Aweys uu dooyo inuu ka ambabaxo Garoonka Hobyo, iyadoona ay wararku sheegayaan inuu kusii jeedo dalka Qadar halkaasi oo ay ka socto Diyaar garowgii lagu soo dhaweyn lahaa Xassan Daahir Aweys.
Safarka la doonaayo in Xassan Daahir loogu Ambabixiyo Qadar ayaa waxa uu salka ku hayaa Khilaaf maamihii ugu danbeeye ka jiray Maamulaa Xarakada Alshabaab isagoona looga cabsi qabo Xassan daahir inuu ku baxo Gacanta Hoggaamiyaha Al-qacidada Somalia ee Alshabaab.
Maamulada Xumin iyo Xeeb iyo Galmudug ayaa ciidamadooda heegan galiyey cabsi ay ka qabaan in Ciiddamadda Xassan Daahir Aweys ay awood Argagixisnimo ku dhex yeeshaan deeganadaasi ay ka amriyaan Maamuladaasi.
Wararku waxa ay sheegayaan in iminka Xassan Daahir iyo Maleeshiyadiisu ay gudaha ugu jiraan Hobyo waxaana jira Dhaqdhaqaaqyo ay Xiligaani wadaan Ciiddamadda Ximin iyo Xeeb oo ay ku doonayaan inay ku fashiliyaan Xoogaga is ceyrsanaaya ee Alshabaab.
Shabaab ayaa todobaadyadi u dambeeyey dhaxdooda waxaa ay isku ugaarsanayeen gudaha degmada Baraawe , waxaana Khilaafkooda uu ahaa mid cirka isku sii tolayey marba marka xigta.
Warar soo baxayey shalay ayaa sheegayey in Ibraahim Afghan oo ahaa ninki labaad ee Shabab la Khaarijiyey oo ay dileen xubno taabacsan Abu-Zubeyr .
Ugu danbeyntii Khilaafyada iyo Is ficilka u dhexeeya Kooxda Alshabaab ayaa waxa uu dhiiri galin u yahay Ciiddamadda Xooga Dalka ee iyagu rasaasta la daba kacaayay mudooyinkaani Maleeshiyaadka Alshabaab.
Wasiiro ka socda Dowlada Somalia oo baladweyne garay
Al-shabaab oo la Ogaaday goobaha ay Magaallada Muqdisho uga dhuuntaan iyo meelaha laga hago weerarada